唤醒wafuna ukuqala eyakho ibhlog吗？ Okanye，ngaba sele unayo ibhlogi ongaqinisekanga ukuba uza kuyithatha njani kwinqanaba elilandelayo?
Ukuba impendulo yakho ngu "母羊" 埃里·菲法·因多沃.
0.0.1 圭亚那·库西（Kwesi sikhokelo sokubhloga）：
0.0.2 Kutheni le nto isikhokelo sokubhloga？ Kancinci malunga nam
1.1 1. Khetha i-web主机elungileyo kunye negama lesizinda
1.1.3 UkuBamba iBlog okucetyiswayo kwe
1.3 3. Faka i-WordPress kwi-web主机yakho
2.1.3 3. Isihloko esinamandla okuhlala（umxholo ohlala ubalasele）
3.1 巴拉进入efundwa ngabantu
3.5 5. Amaqonga eQ & 一个
4.5 Imidiya yeNtlalo，ukuThengisa kunye ne-SEO
4.7 乌瓦万约·卢维（Stanya seWebhusayithi）
圭亚那·库西（Kwesi sikhokelo sokubhloga）：
Kutheni le nto isikhokelo sokubhloga？ Kancinci malunga nam
Ndaseka iiMfihlo zokuSingathwa kweWebhu ezatyhilwa（i-WHSR）emva konyaka ka-2008，kwaye ndiyibulela ngokuyamkelayo变成了yokuba uluntu lokuhlawula i-blog siye sahamba saya emandleni。 Ukusukela ngoko，i-WHSR ikhule ibe yenye yezona ndawo zikhokelayo ze-Net zokufumana iingcebiso kwi-web，kwaye ndiye ndatsala uphawu kwamanye amazwi anamandla kubloga okwangiibaibob kuwanibob akwibakbo nabob kuwibakkabo.
Ngesi sikhokelo esingenaxhala，ndiza kukubonelela ngezinye zezinto ezikhawulezayo，ekulula ukusiqonda kwaye ngaphezulu kwazo zonke izisombululo ezisebenzayo kwiingxaki扎胡zokubhloga- okubangelwa ngamava上午kunye nakwiingqondo zabantu abakonwabelayo abakwenzayo.
My Iphepha leprofayile lomlobi ku-Portlogger.net -Ndipapashe rhoqo kwinani eliphezulu lesikhokelo seblogi esentloko phakathi konyaka ka-2015 ukuya ku-2018.
yokubloga eyaziwa kakhulu的软件，WordPress.org，isimahla。 WordPress的kunye neeplagin asimahla。 Kwaye kukho izigidi ngezigidi ze教程zamahhala ukuze uqalise（kubandakanya nale）。 Iindleko ezizodwa ezibandakanyekayo ukuqala iblogi yimali ohlawula ngayo umgcini wewebhu kunye negama lesizinda.
Ngokuqinisekileyo，inokuphamba kakhulu kwinqanaba elizayo； kodwa ngokuthetha nje ngokubanzi，ukubhloga kuyenzeka-wonke umntu onekhompyuter ononxibelelwano lwe-Intanethi。 Ngapha koko ungayenza ibhlog kwaye uyenze ukuba iqhubeke kwimizuzu engama-20 ezayo。阿曼雅洛（Amanyathelo akhankanyiweyo）库拉马尼塞洛（aula）.
Ngokusisiseko okufuneka ukwenze：
Khetha i-web主机elungileyo kunye negama lesizinda
Khomba i-DNS yakho kwi-web主机yakho
Faka i-WordPress kwi-web主机yakho entsha（kulula kakhulu ukusebenzisa i-auto-simfaki）.
Izandi zilula？ Uyabheja!
Ndiza kuhamba kumanqwanqwa angezantsi。 Zive ukhululekile ukuba ukuba sele uyazi indlela yokuseta ibhlog yakho.
1. Khetha i-web主机elungileyo kunye negama lesizinda
Ukuqala ibhlog yakho eyenzelwe ngokwakho，uya kudinga kuqala igama lesizinda kunye ne-akhawunti yokubamba iwebhu.
Indawo yakho yegama ibhlog yakho。 Asiyonto yomzimba onokuthi uyichukumise okanye uyibone; kodwa ngumtya wabalinganiswa abanikezela iwebhusayithi yakho ukuba bayazazi-njengesihloko sencwadi okanye indawo。 Isizinda sakho’sixelela’iindwendwe zakho ukuba zeziphi iibhloko zabo abazindwendwelayo.
Ukusingathwa kwewebhu，kwelinye icala，yindawo ogcina kuyo umxholo webhlog yakho-amagama，imixholo yebhlog，imifanekiso，iividiyo，njalo njalo.
Unokukhetha kwaye ubhalise amagama akho电子域nge-registrar域。 GoDaddy，IgamaCheap，Hover，yaye Domain.com zezona zerejista zaziwayo kwimarike.
Qaphela ukuba kubalulekile ukwahlula ubhaliso lwesizinda kwi-web主机yakho。 Ngenxa yokuba umgcini wewebhusayithi yakho enikezela i-domain yasimahla ayitheth ukuba ufanele avumele inkampani yokubamba ilawule ubhaliso lwesizinda sakho。 Ngokwam，ndisebenzisa i-NameCheap ukulawula ukubhaliswa kwam kwesizinda; kodwa nayiphi na enye irejistri eyaziwayo yeerejista kufanelekile。 Ngokwenza njalo，ndiyakwazi ukutshintsha i域yam ye-DNS nangaliphi na ixesha endiyifunayo kwaye ndizikhusele ekuvaleni umgcini wewebhu othile。 Ndikucebisa ngamandla ukuba wenze okufanayo kukhuseleko lwakho.
Ngokuphathelele ukusingathwa kwewebhu，琼加·奥夸姆eyona ndawo ikhethiweyo yokubamba iwebhu kwaye Isalathiso sokusingathwa kwendibano.
Kwindlela yokubamba ekwabelwana ngayo-Nangona izibonelelo zokubamba zincinci xa kuthelekiswa nezinye（i-VPS，ilifu，njl njl），uyakufuna isabelomali esincinci（kaninzi） <$ 5 / mo xa usayina）nolwazi lobuchwephesha ukuqala。 Xa ukhetha i-web主机yebhlog yakho，ezi zinto zihlanu zokujonga：
因滕别科 -ibhlog yakho kufuneka izinzile kwaye ifumaneke kwi-intanethi ye-24×7.
Isantya -Udinga umphathi oza kulayisha ngokukhawuleza kuba isantya sichaphazela amava omsebenzisi kunye nokhangelo lokukhangela.
纳马比索 -图书馆 <$ 5 / mo sisiqalo esihle，awudingi inkonzo yeprimiyamu okwangoku.
伊古比·洛库胡拉 -Uya kudinga ukuphuculwa kokubamba（amanqaku ongezelelweyo，amandla eserver ngakumbi，新泽西州）njengoko ibhlog yakho ikhula.
墨水 -Intanethi ihlala itshintsha，kuhlala kulungile ukuba kubekho umntu okuxhasayo kwicala lobugcisa.
UkuBamba iBlog okucetyiswayo kwe
Bamba iibhloko ezimbini kwi-InMotion Ukusingathwa nge- $ 3.99 /月.
我是主持人yeye yezona ndawo zingabizi kakhulu kwi-web主持人jikelele，ngakumbi ngexesha lokubhalisa i-honeymoon。 Ngaphandle kokuba yinkampani yokubamba uhlahlo-lwabiwo马里，i-Hostinger ibonelela ngeetoni zeempawu zokubamba i-premium ezifanelekileyo kwiibhlog.
Ingcebiso yePro：Ngenxa yokuba umgcini wewebhusayithi aziwa kakhulu，oko akuthethi ukuba yeyona nto ibhetele kwibhlog yakho。 Jonga intsebenzo yokubamba kunye nokuphononongwa ngononophelo ngaphambi kokuba uthathe isigqibo.
Okulandelayo，kuya kufuneka uvuselele irekhodi le-DNS kwirejista yegama lesizinda（apho ubhalise khona isizinda sakho kwinqanaba＃1）ukukhomba kumaseva wewebhu yakho（InMotion Hosting，Hostinger okanye SiteGround）.
I-DNS imele i-Domain Name System域名系统名称-IP Yeseva。 Ke，Xa umsebenzisi engena "kwiWebHostingSecretRevealed.net" Iirekhodi ze-DNS ziya kulanda idilesi ye-IP yomgcini wam wewebhu kwaye ikhonze indawo yam kumsebenzisi.
Umzekelo：Ukubonakalisa iwebhusayithi kwi-InMotion Ukusingathwa kwamagama e-GoDaddy.
Nantsi imiyalelo yenyathelo nenyathelo yokuhlaziya ibhlog yakho ye-DNS apha GoDaddy或Namecheap.
3. Faka i-WordPress kwi-web主机yakho
Ukuqala ukubhloga usebenzisa i-WordPress kuya kufuneka kuqala ufake inkqubo kwi-web主机yakho。 Oku kunokwenziwa ngesandla，okanye ngokuzenzekelayo kusetyenziswa usetyenziso lokufaka kunye。 Zombini ezi ndlela zilula kwaye zinokwenziwa ngokulula.
Ngokujonga nje ngokukhawuleza，nali amanyathelo ekufuneka uwenze：
Khuphela kwaye解压缩iphakheji ye-WordPress的Kwi-PC yakho yangaphakathi.
Yakha idatha ye-WordPress Kwi-server yakho yewebhu，kunye nomsebenzisi we-MySQL onamalungelo onke okufikelela kunye nokuguqula.
Vula i-wp-config.php kumhleli wesicatshulwa（i-notebook）kwaye ugcwalise iinkcukacha zakho zeenkcukacha.
Jonga i-WordPress yokufaka ifayile ngokufikelela kwi-wp-admin / install.php kwisiphequluli sakho sewebhu。 Ukuba ufake iWindowsPress kwingxelo yenkcazo，kufuneka u tyelele：http：//example.com/wp-admin/install.php; ukuba ufake iWindowsPress kwisigcawu sayo esibizwa ngeblog，umzekelo，kufuneka和tyelele：http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Uninzi Lweeblogi ngeli xesha alizifaki ii-WordPress的Zazo Ngesandla.
Ngenkxaso yeenkonzo zokufakelwa konqakrazo olunye Softaculous kwaye Indawo ye-Mojo Market（Kuxhomekeka ekubeni ngowuphi umamkeli wewebhusayithi oyisebenzisayo），inkqubo yokufaka ithe ngqo kakulu kway.
将Kwireferensi yakho，le mifanekiso ilandelayo，ibonisa apho unokufumana khona插入oyifakayo ngokuzenzekelayo猕猴桃主机面板中。 Ukufaka i-WordPress，Cofa Nje kwi-icon esijikeleze kwaye ulandele imiyalelo-yobungqina be-dummy-inkqubo yakho ye-WordPress kufuneka iphakame kwaye isebenze ngaphantsi kwemizuzu emi-5.
Umzekelo：Ungafaka i-WordPress kwi-web主机yakho ngokuchofoza nje ezimbalwa usebenzisa i-Hostinger Auto Instider（tyelela i-Hostinger apha）.
Izinto zinokubonakala zahlukile kwiinginginya ezahlukeneyo zewebhu kodwa inkqubo yona iyafana。 Ke sukuzikhathaza ukuba awusebenzisi enye yezi ndwendwe ndizibonisayo apha.
Ngokwam ndicinga ukuba i-WordPress yeyona ndawo ibhloging yeyona intsha。 Isekwe kumanani-nkcazo avela kwi，ngaphezulu kwe-95％yeebhloko zaseMelika zakhiwe zisebenzisa i-WordPress。 Ehlabathini lonke，kukho phante Iibhloko zeebhloko ezingama-27 ziqhutywa kwiWordPress.
Nje ukuba inkqubo yakho ye-WordPress的WordPress ifakwe，uya kunikwa i-URL的yokungena kwikhasi lomlawuli我们的WordPress。 Kwiimeko ezininzi，i-URL iya kuba yinto efana nale（kuxhomekeka kwifolda oyifakileyo kwi-WordPress）：
Yiya kule URL kwaye ungene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha; kwaye ukusuka apho，ngoku uya库巴sekupheleni-kwesiphelo（ideshibhodi）yesiza sakho se-WordPress-le yinxalenye yebhlog apho unokufumana kuphela njengomlawuli.
Inguqulelo yamva nje yeWordPress ngeli xesha lokubhalwa yinguqulelo 5.3.2-ngokuzenzekelayo oza kube usebenzisa I-WordPress Gutenberg njengomhleli wenqaku。 UGutenberg uzisa ukuguquguquka okuninzi kwiqonga le-WordPress。 Oku kuluncedo kakhulu kubaqalayo kuba izinto ezininzi njengokuseta imibala yangasemva kwaye ngaphezulu azisafuni kukhowudi。 Inkqubo yebhlokhi iyanceda ngokulawulwa kokumiswa kwamanqaku.
Ukubhala nokushicilela isithuba esitsha，elula kwi-barbar yangasese，cofa“ Iifayile”> ‘Yongeza Entsha’uze uhanjiswe kwisikrini sokubhala。 Cofa’Phambi kokuqala’ukujonga indlela izinto zibukeka ngayo ekugqibeleni（oko abafundi bakho baya kuzibona），nqakraza’Shicilela’xa isithuba sigqibe.
你好！ Ngoku uneposti yakho yokuqala epapashiweyo.
Kulapho ungayifumana khona yonke imixholo和WordPress yasimahla。 Izihloko ezidweliswe kulolu lawulo zilandela imigangatho ebekiweyo ebonelelwa ngabaqulunqi beWordPress，ngenxa yoko，ngokoluvo lwam，le yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana iziyilo zomxholo wesimahlalow.
Enye indlela yokufumana iindatshana eziphezulu ezihlawulwayo kukubhalisela kwiClubs WordPress主题.
Ukuba kokokuqala ngqa ukuva ngeeKlabhu zoMxholo：Uhlawula imali efunekayo ukuze ujoyine iklabhu kwaye ufumana uyilo olwenziweyo kwiiklabhu。 Izihloko ezinikezelwa kwiKlabhu yeNqaku zihlala zenziwe ngobuchule kwaye zihlaziywa rhoqo.
eziphambili Izihloko，I-Studio Press，yaye Izihloko zeArtisan Iintlanzi ezintathu ze-WordPress主题
Nazi nabanye abaninzi ngaphandle-ezinye iiklabhu zidibanisa noshishino oluthile，njengabaqeshisi okanye izikolo; kodwa siza kubhala kuphela ezintathu kule nqaku.
Ngaphezu KWE-80 i-premium WordPress theme，Nqakraza apha ukujonga iidemos zangomxholo.
Ukutyelela：StudioPress.com。 Ixabiso：$ 129.95 / umxholo okanye i- $ 499.95 / ixesha lokuphila
Ukuba ungumsebenzisi我们-WordPress wexesha elide，mhlawumbi uvile nge-StudioPress。 Kuyaziwayo Isiseko seGenesis，isiqulatho se-WordPress坤耐ne-SEO友好型kwiintetho zonke ze-StudioPress.
I-StudioPress inikeza intengo eguquguqukayo ngokusekelwe kwiimfuno zakho。 Umxholo weGenesis，价格：$ 59.99美元。 Umxholo we-premium，oquka i-Framework yeGenesis，indleko ye-99 nganye。 Ukuba ufuna ukufikelela kuzo zonke iindatshana，翁加拉瓦拉I- $ 499.
丰沙节： 纳粹ezinye izinto ezilula onokuthi uzenze ukukhusela ibhlog yakho ye-WordPress
Xa kuziwa kwintsebenzo yokwenziwa kweblogi，I-W3 Iyonke iCache 夸伊·乌库塞宾扎ngokukhawuleza Olona khetho ludumileyo.
Ezinye iiplagi ezisebenzayo ekufuneka ujonge kuzo I-Cloud Flare，yaye WP Super efihlakeleyo。 i-Cloud Flare，iCloud Flare； i-Cloud Flare； yiplagin yasimahla enikezwe yinkampani yeCDN ngelixa i-WP超级缓存iphuhliswa nguDonncha kunye不自动，inkampani ephuhlise kwaye isebenzisa i-WordPress ngoku.
I-plugs ye-cache yinto ekufuneka yenziwe-kwi-blog yanamhlanje-iphucula amava omsebenzisi kakhulu ngokwandisa ukusebenza kweseva，ukunciphisa ixesha elithathiweyo ukulanda kunye nokunyusa isantya soya.
Ukuba ibhlog yakho inemifanekiso emininzi kuyo-cinga ukongeza EWWW图像优化器。 Sisimo esinezinto ezinqakraza kwimifanekiso onakho ukukhulisa iifayile zemifanekiso kwilayibrari yakho。 Ikwanayo imbonakalo yokucinezelwa komfanekiso ozenzekelayo ukunciphisa ubungakanani bemifanekiso ngelixa uyifaka。 Ngokukhulisa imifanekiso，unokunciphisa amaxesha umthwalo wephepha kunye nesiphumo sokusebenza ngokukhawuleza kwesiza.
丰沙节： I-SEO 101 okokuqala yeeblogger
Ngokwaziswa komhleli we-Gutenberg kwi-WordPress 5.0，iibhlogi ngoku zinokwenza umxholo usebenzisa umhleli osekwe kwibhlokhi。 Ngokuzenzekelayo，i-WordPress ibonelela ngeeseti zeebhloko ezisisiseiseko zomxholo onjengomhlathi，umfanekiso，iqhosha lokufowuna-ukuya kwisenzo，indlela emfutshane，njalo njalo。 Ngokudibanisa ii插件ze-Gutenberg块插件，ufumana ukongeza izinto ezibandakanyekayo（imizekelo-i-FAQ，i手风琴，iprofayili yombhali，i-carousel，i-Click-to-Tweets，iibhloko wi-nhoj kjlogn）.
Ayizinzisi，Iibhloko zokugqibela，yaye I-CoBlocks zintathu插件ezilula nezisimahla ze-Gutenberg阻止ukuze uzame.
Ngokwesiqhelo indlela entsha entsha ebhloga ngayo：Babhala malunga nomsebenzi wabo ngoMvulo，ukuzonwabisa ngolwesibini，iimovie abazibukele ngoLwesithathu，kunye nekibono yezopolitiko ngeempelave。 Ngamafutshane，aba班图语babhala nje kwiintlobo ezahlukeneyo zezihloko ngaphandle kokugxila.
母羊，ezi bhulogi zizakuqokelela ngokulandelelanayo phakathi kwabahlobo kunye neentsapho zabo； Kodwa Yile Nto.
Kunzima kakhulu ukuba nenani elikhulu labafundi abathembekileyo xa ubhloga ngokungaqhelekanga kuba abantu abayi kuziva ukuba ungumgxeki我们电影，umvavanyi wokutya，okanye umgxeki weencwadi。 Abakhangisi bayakuthandabuza ukuthengisa kunye nawe kuba abazi ukuba yintoni。 Ukwakha ibhlog ephumelelayo，kufuneka ufumane i-niche.
Ukufumana i-niche efanelekileyo yokubloga，nanti ingongoma eziphambili ekufuneka uziqwalasele.
Ukuba uye wacinga ukuba "Ndingathanda ukuba umntu ebhuloze ngale nto", 伊乐姆祖祖（Yile Mzuzu）我们。乌库巴语kuyisihloko onokuthanda ukwazi ngokubanzi，ngoko mhlawumbi sihloko abanye abantu abafuna ukwazi ngako.
乌鲁皮乌尔瓦齐（Uluphi ulwazi olukhethekileyo）？ Unokubonelela njani变成ekhethekileyo kwisihloko esingabikho mntu吗？ Kusenokuba ngudliwano-ndlebe kunye nengcali.
Umzekelo：我的博客kaGina，Ukuvuma ukungapheleli，ijolise ekuncediseni omama ukukhulisa abantwana abaneemfuno ezizodwa.
Khumbula ukuba uza kubhala，ufunde kwayethethe ngesihloko sakho ngalunye usuku ngalunye kwiminyaka embalwa ezayo。 Ukuba unganomdla kwisifundo sakho seblogi，kuya kuba nzima kakhulu ukuzinza rhoqo.
Ngaphezu koko，uya kuvuya ukubhalwa kwezi zihloko.
3. Isihloko esinamandla okuhlala（umxholo ohlala ubalasele）
Nangona ukuphikisana kukukhulu，akuqinisekisi ukuba isihloko sakho siya kuba ngeveki ezayo。 Ngokomzekelo，ukuba unomdla kakhulu ngeMidiya kwaye uqala iblogi ejolise kuyo，xa loo nto iwa ngefashini uya kuba ngaphandle kokuqukethwe。 Kungcono ingcamango yokugxila kwesihloko esipheleleyo，njengokuthi "自助餐餐厅iindlela zokuzonwabisa zentlalo" 冈野 "Iifayile Zesohlwayo". Ngaloo ndlela，ukuba i-fad iyawa ngefashoni，ibhulogi yakho isenokuhlala ikhangele nantoni na eyayifaka indawo.
Ibhlog yakho kufuneka ibekhona生态位ongayenza imali.
Zibuze ukuba ngaba sisihloko esiya kutsala abafundi kunye nokwenza ingeniso- nokuba yintengiso okanye intengiso。乌库巴语ngokuxhasa ishishini lakho esele likho，ngaba ibhlog inizisa abathengi abatsha吗？ Ukuba ubhloga nje ngenxa yokuba unomdla malunga nomxholo，ngaba ikhona indlela yokwenza imali ibhlog yakho nganye?
ndisebenzise SpyFu，isixhobo sokuhlawula ngokuhlawula ngokuthelekisa，ukuqikelela inzuzo ye-niche ngamanye amaxesha。 Google的AdWords，AdWords，kufuneka kubekho imali eyenziwayo kulo mhlaba。 Nantsi eminye imizekelo emibini endiyifumeneyo：
Umzekelo＃1：Lezi zibalo zokukhangisa zomenzi wezambatho zezemidlalo（cinga iimpawu zezemidlalo njenge-Adidas okanye i-New Balance kodwa encinci）。 Le nkampani yayichitha ngaphezulu kwe-100,000 ngenyanga ngenyanga kwi-Adwords ngokweSpyfu.
Umzekelo＃2：Yizibalo zesibhengezo somboneleli we-IT。 Kukho i-20 nabanye abadlali abakhulu kule利基。 Le nkampani，ngokukhethekileyo，ithenge iintengiso关键字ze-3,846 kwi-Google kwaye yachitha malunga ne- $ 60,000 ngenyanga.
丰沙节： Ungawubhala njani umxholo omnye ubuncinci ngeveki ngokungaguqukiyo
Inyaniso elusizi yababhlogi abaninzi phaya phandle ibathathe ixesha elininzi ukwakha abafundi babo。 Ukufumana iphepha labo lokuqala leemayile ezili-1,000 XNUMX kungathatha iinyanga，kwaye ezinye iibhloko azinakuze zibonakale zifika apho.
Abantu banxila kuhlaziyo lweendaba zentlalo，iindaba ezondlayo，ii-imeyile，kunye neentlobo ezahlukeneyo zentengiso。 Kuya kusiba nzima ukufumana abantu ukuba bafunde umxholo wakho。 Nangona kunjalo，usenokwenza kakuhle ukuba uyazi ukuba ngubani na abaphulaphuli bakho abafanelekileyo kwaye bafuna ntoni。 Cinga ngesikhewu esikwi-niche yakho，loluphi uhlobo lomxholo ongekho kunye nendlela onokuthi uluxabise ngayo ngakumbi kubaphulaphuli bakho.
纳粹izinto ezinokukunceda kuphando lwakho：
Sebenzisa izixhobo zenendaba zentlalo ukulandelela umxholo ophumeleleyo kwimidiya yoluntu。 Kwiindawo ezinje，unokuvelisa imixholo yokufumana ingxelo elungileyo evela kwimidiya yoluntu.
Sebenzisa isixhobo sophando segama eliphambili ukukhangela izihloko ezithile ezijongwa ngabantu ngaphakathi kwe-niche yakho。 Unokuvelisa umxholo osekwe kula magama aphambili.
Kuya kufuneka uqhubeke wabelane ngezithuba zakho，ngapha nangapha。 Ukuba umenyiwe ukuba ujoyine ibhodi yePinterest yeqela elidibanisa i-niche yakho，sayina kwaye wabelane kwaye uphawule rhoqo。 Ukuba ujoyina uluhlu lweebhlogger ezinengcinga efanayo，izinto ezingathandekiyo ziya kwabelana ngomongo rhoqo rhoqo-ngeveki okanye yonke imihla。 Oku kuyakunceda ukukhulisa ukufundela kwakho kunye nokuzibandakanya.
Uncedo kwimicimbi是Twitter。 Nika ingxelo ngezithuba zamanye amalungu。 Yabelana ngamanqaku kwincwadana yakho。 Jikelezisa kwaye uvuza iibhlog ozithandayo ngokwenza iveki nganye okanye inyanga.
Buza indlela onokumnceda ngayo umntu kunye nesithuba seendwendwe okanye ngokunikezela ngeendawo zokuvakasha。 Thengisa iimveliso zabo，basebenzise amaqabane abo asebenzisanayo，khuthaza izixhumanisi zabo kumajelo asekuhlaleni xa ubathengisa。 Njengamathuba okufumana abablogi beza，aba bhulogi baya kukhumbuza uncedo lwakho kwaye bakumeme ukuba uthathe inxaxheba.
Ndiyakhathazeka xa ndifumana ibhlog enesihloko Ndonwabile ngokupheleleyo kuphela ukufumana umxholo kunye ne-chunk enkulu yesicatshulwa，iziqendu ezimbalwa，akukho zihloko ozanye iimbumbulu kunye。伊扬迪格索塔.
Ngaphezulu koko ndikufumene ngasentla，ibhlog yakho ayifanelanga ukuba ngumthwalo kubafundi ngee-pop-ups kunye nokucofa-ngaphakathi。 Endaweni yoko，bonisa umxholo ngobuchule kubafundi bakho。 Yazi imida yexesha lokufunda kwabafundi bakho kwaye uqonde ukuba yintoni ebenza ukuba bahlale kwindawo yakho.
Nantsi进入onokuyenza ukwenza ibhlog yakho ifundeke lula：
Yenza iblogi yakho isebenzise ii-header，ii-header，ii-bullet point，okanye uluhlu olunezinombolo。 Oku kunceda umxholo wakho ukuba ubonakale ulungelelaniswe ngakumbi.
Hlula umxholo网站上的yakho ube ngamacandelo okanye iziqendu。 Udonga lwesicatshulwa lunokubonakala lusoyikisa kwaye lunika abafundi abaninzi.
Kunqande ukusebenzisa ifonti yamafashoni。 Namathela kwiifonti ezikhuselekileyo kwiwebhu ezifana neAgency，Georgia，Times，njl.
Sebenzisa isiNgesi esilula kwaye ubhale izivakalisi ezifutshane。 Injongo yokufundwa kwenqaku lakho kumfundi webanga lesibhozo.
乌库加拉（Ukuqala），库克（Ukupulawula）伊斯兰教徒（ngokuqinisekileyo yeyona ndlela ishiywe kakhulu yokwakha ibhlogi-ikakhulu kuba abantu banxanela ekwenzeni umgangatho） Nangona kunjalo，ukuphawula，i-blog yindlela esemgangathweni，yokwakha，i-traffic eyenzeka ukuba，ibe simahla-awunakuphikisana ngaloo nto!
Kukho imithetho emibini egolide yokuphawula ibhlog：
Soloko ubhala ingxelo esemgangathweni。 Ukuba awunayo变成eyongezelelweyo yokongeza kwingxoxo，sukuyeka uluvo（"恩科西-恩库鲁邮局" izimvo … azisebenzi）
Yilahla ikhonkco kuphela apho kufanelekileyo。仓木芭蕉（Musa ukugaxekile） iya kukucima ngomlilo.
Ngelixa omnye umthetho（hayi umthetho wegolide，mhlawumbi），ukuba ushiya ikhonkco，unganiki i-URL yebhlog yakho。 Endaweni yoko qhagamshela kwisithuba esifanelekileyo sakho esongeza ixabiso kwisithuba sokuqala kunye nengxoxo。 Ukudibana sisitshixo apha.
5. Amaqonga eQ & 一个
Iiforamu kunye namaqonga eQ & ziindawo ezintle zokufumana isihlalo phambi kwabaphulaphuli bakho abanomdla。 Ubuqili kukujonga iincoko eziqhubekayo kwi-niche yakho ukuze ukwazi ukungena xa unento eluncedo ukuyithetha（kwaye hayi，ayizizo zonke iiposti eziya kuba lithuba-kodwa abanye baya kuthanda）。 Uya kudinga umfundi okondlayo ofanelekileyo，njengo-Feedly，Ukwenza lo Msebenzi.
Yenza umxholo wesiko elifanelekileyo kwincoko eshushu ngokukodwa。乌姆泽克洛（Umzekelo），库巴（Umzekelo），乌库巴·乌姆图（Ukura ukwenza）进入NGE Izinto ezingafunekiyo kukuba xa umntu ebuza umbuzo，abanye banombuzo omnye-kwaye impendulo yakho yeforum kunye nekhonkco iyakuphila ukubacebisa kanye xa ixesha selifikile.
Ngokwendlela amaqonga eQ & ndiyacebisa Anokuwasebenzisa
IQuora，iKlout，kunye neYahoo！ Iimpendulo-ezi zintathu zeqonga lipheleleyo li-Q&一个
丰沙节： Fumana iindlela ezininzi zokwenza imali ibhlog yakho kwaye ufunde uKevin Muldoon的Ityala lokuthengisa ngokuBloggingTips.com是-$ 60,000.
Nangona izixhobo zasimahla eziluncedo kunye neenkonzo zewebhu zikhona kwi-intanethi，ingxaki ikukufumana kuzo zonke ezinye izixhobo okanye / kunye nezixhobo eziphelelwe lixesha.
Njengesipho sokuhlukanisa ukufunda ukufunda yam kude kube apha，ndiza kukunika uluhlu lwezixhobo zamahhala esizisisebenzisa lonke ixesha kwi-WHSR。 Inhlanhla，kwaye ndinqwenela ukuba uphumelele ekuhambeni kwakho kubhaliso.
App Hemingway-Bhala ngokufutshane nangesibindi ngesixhobo.
Fotor -Hlela kwaye uyila imifanekiso entle yesixhobo seendaba zentlalo，iiposta，Isimemo，新泽西州.
Canva -Yila imifanekiso emihle kunye nezithuba zemidiya yoluntu.
Wizard yoyilo -Yila imifanekiso entle usebenzisa iitemplate zasimahla kunye nemifanekiso elungiselelwe eyenziwe.
JPEG迷你-Cutha ubungakanani Beefayile ze-.jpeg.
图标查找器-Isalathiso se icon enkulu yasimahla.
印加迪·叶拉巴希·叶约纳-Akukho mntwana-ulwazi lwehlabathi ngokuthe ngqo kwi-CIA.
共和国-阿马佩法（Amaphepha amhlophe），伊辛克洛（iingxelo），昆尼·内兹加内科（kunye neziganeko）.
YoPhuhliso loPhuhliso -Imagazini yasimahla，amaphepha amhlophe，kunye nezifundo zamatyala.
图书馆yeHibspot -Umthombo olungileyo wesalathiso sentengiso.
BuzzFeed趋势-Fumana izihloko ezishushu zamva nje kwi-BuzzFeed.
Imidiya yeNtlalo，ukuThengisa kunye ne-SEO
I-Bing网站管理员工具Isixhobo sokuxilonga simahla seBing.
I-Google网站管理员工具-Isixhobo sikaGoogle simahla sokufumana isifo.
兰德拉-Bambisa abantu abakhuphisana nabo
SEO enkulu -Inguqulo yasimahla ikuvumela ukuba ujonge iphrofayli yendawo yokudibanisa（CF / TF）ngokukhawuleza.
订婚湾-Umntu kuyo yonke intengiso，ukuthengisa kunye neqonga lezinto ezizenzekelayo
Nje nge-Explorer -Qwalasela iimetric zentlalo yakho（okanye ezokhuphiswano lwakho）.
Tweet Deck -I-Mange akhawunti ye-akhawunti kwi-dashboard enye.
Buzz Sumo -Khangela umxholo odumileyo kunye nefuthe elinethiwekhi ezinkulu zenethiwekhi yoluntu.
伊波迪（Ybhodi yeTek）-Uphando lweNtengiso yeendaba zentlalo.
谷歌分析-Iibalo zasimahla zewebhu.
I-YouTube分析-Izibalo kwiividiyo zakho zeYouTube.
Izibalo zeWP -Thelekisa ibhlog yakho ye-WordPress的kunye nabanye.
INdlela yeSitalato-Inkqubo elula kunye nolawulo lokuhamba komsebenzi.
Uvavanyo lwephepha lewebhu-Jonga isantya sephepha.
Iindleko eziqikelelweyo ukuqala iblogi ebandakanya igama lesizinda kunye nokusingathwa kwewebhu kungaphantsi kwe- $ 100 ngonyaka（ngaphantsi kwe- $ 10 ngenyanga）。 Le ndleko isekwe kwibhlog yakho eyenzelwe wena（usebenzisa i-WordPress）。 Ukwaphulwa kweendleko kuya kuba：$ 15 ngonyaka ngegama lesizinda se-.com kwaye malunga ne- $ 60 rhoqo ngonyaka ngemali yokubamba iwebhusayithi.
Ukufumana umfanekiso ophucukileyo wokuba iibhlog ziye zahlawulwa njani，ndazihlulahlula zaba ziindidi ezi-2，enye ke apho ujongana ngqo nabathengi okanye abathengisi ngelixaenye ilapho ujoyyweinkyinkinkbo enike.
Xa ujongene ngqo nabathengi okanye abathengisi，unolawulo ngakumbi kumaxabiso。 Unokufumana imali ngo：
-Ukuthengisa umxholo wepremiyamu（indawo yobulungu）
Kukho amaqonga amaninzi apho ungaqala khona ibhlogi yasimahla namhlanje，oku kubandakanya i-WordPress.com，iTumblr okanye iBlogger。 Ukwenza ibhlogi yasimahla，konke ekufuneka uyenzile kukubhalisa kwaye ungaqala ukupapasha umxholo wakho.
Akukho nto iza simahla kwilizwe lethu。 Kukho inani lezinto ezingeloncedo ngeqonga lokubhuloga simahla：
-Igama lebhloko lebhlog yakho libonakala liyi-subdomain efana ne- "myblogname.wordpress.com" 冈野 "myblogname.tumblr.com"
-Kukho ukusebenza okulinganiselweyo，iiplagin kunye nokukhethwa komxholo ongayenza kwiblogi yakho
-Ngokwesiqhelo，amaqonga asimahla anika umda kumathuba okwenza imali ibhlog yakho
Ndicebisa ukuba uqalise ukubhloga kwebhlog yakho usebenzisa eyakho i-WordPress.org（njengendiyigqibileyo kwesi sikhokelo）。 Ngaphandle kokuhlula umda webhlogi yasimahla，ukukhula okunokubakho kweblogi yakho akunamkhawulo.
Igama Lebhlog yakho ibonakala isisiza njenge "myblogname.wordpress.com" 冈野 "myblogname.tumblr.com"
Kukho ukusebenza okulinganiselweyo，iiplagin kunye nokukhethwa komxholo ongayenza kwiblogi yakho
Ngokwesiqhelo，amaqonga asimahla anqumle ithuba lokwenza imali ibhlog yakho
Isikrini esibanjwe Umgaqo-nkqubo weNtengiso weWindowsPress。